IN mg Hiditra
India (Hindi: Bhārat), ofisialy ny Repoblika Indianina (Hindi: Bhārat Gaṇarājya), dia firenena any Azia Atsimo. Firenena fahafito lehibe indrindra amin'ny faritra izy io, firenena faharoa be mponina, ary demokrasia be mponina indrindra eto an-tany. Feno ny ranomasimbe Indianina ao atsimo, ny Ranomasina Arabo any atsimo andrefana, ary ny Bay-bengala any atsimoatsinanana, mizara ny sisin-taniny amin'i Pakistan hatrany andrefana izy; Shina, Nepal, ary Bhutan any avaratra; ary Bangladesh sy Myanmar atsinanana. Ao amin'ny Ranomasimbe Indianina, India dia eo akaikin'ny Sri Lanka sy ny Maldives; ny Nosy Andaman sy Nicobar mizara sisin-dranomasina amin'i Thailand sy Indonesia. Tonga teo amin'ny kaontinanta Indiana avy tany Afrika tsy ela ny 55 000 taona lasa izay. Ny fipetrahan'izy ireo maharitra, tany am-boalohany amin'ny endriny samihafa amin'ny maha-mpihaza mpihaza, no nahatonga ny faritra dia tsy manam-paharoa, faharoa ihany no mankany Afrika amin'ny maha-fototarazo iraisan'ny olombelona. Ny fiainana milamina dia nipoitra tamin'ny kaontinanta tany amin'ny sisin'ny andrefan'ny renirano Indus 9000 taona lasa izay, nivoatra tsikelikely tao amin'ny Indus Valley Civilisation millennium fahatelo TK Tamin'ny 1200 al.f.i., dia nisy endrika arabo sanskrit, fiteny Indo-eoropeana, nivadika tany Inde avy any avaratra andrefana, ary nivelatra ho fiteny Rigveda, ary mirakitra ny fiposahan'ny Hinduism any India. Ireo fiteny Dravidian any India dia nomena tany amin'ny faritra avaratra. Tamin'ny taona 400 TK, nipoitra ny fankalazana sy ny fanilihana nataon'ny caste tao anatin'ny Hinduisme, ary nipoitra ny Buddhisme sy ny Jainism, nanambara ny baiko ara-tsosialy tsy misy ifandraisany. Ny fanamafisana ara-politika tany am-boalohany dia nahatonga an'i Maurya sy Gupta Empires miorina amin'ny Bases Gins. Ny vanim-potoanan'ny fiarahan'izy ireo dia nifangaro tamin'ny famoronana be dia be, saingy voamariky ny fihenan'ny salan'ireo vehivavy ihany koa, ary ny fampidirana tsy fahatomombanana ho rafitry ny finoana voalamina. Tany atsimo India, ny fanjakana Afovoany dia nanondrana ny soratra avy amin'ny fiteny Dravidian sy ny kolontsaina ara-pinoana tamin'ny fanjakan'ny Azia atsimo atsinanana.Ny am-piandohan'ny vanim-potoana mediey, ny Kristianisma, ny Silamo, ny Jodaisma ary ny Zoroastrianism dia nametraka ny morontsiraka atsimo sy andrefan'i India. Ny fanafihana mitam-piadiana avy any Azia Afovoany dia manitsakitsaka ny lemaka India, tat establish aoriana dia nanangana ny Sultanate Delhi, ary nanintona ny avaratra amin'i India ho any amin'ny tambajotra cosmopolitan ny finoana silvaly. Tamin'ny taonjato faha-15 dia namorona kolontsaina Hindu izay naharitra ela tany India atsimon'i India ny Fanjakana Vijayanagara. Ao Punjab, nipoitra ny Sikhism, nanda ny fivavahana nanorina. Ny Fanjakana Mughal, tamin'ny 1526, dia nitondra fandriam-pahalemana tamin'ny taonjato roa, ary namela lova maritrano manjelatra. Nanitatra tsikelikely ny fitsipi-pifehezana an'ny orinasa East East British Company, ka lasa India ho ekonomika fanjanahan-tany, fa koa manamafy ny fiandrianany. Nanomboka tamin'ny taona 1858. Ny fahefana nampanantenaina ny Indiana dia nomena tsikelikely, saingy nisy ny fiovana ara-teknolojia, ary nipoitra ny hevitra momba ny fanabeazana, ny maoderina ary ny fiainam-bahoaka. Nipoitra ny hetsika nasionalista mpisava lalana sy nanana hery ambony, izay voamarika ho fanoherana tsy misy herisetra ary nitarika ny fahaleovantenany i India tamin'ny 1947. I India dia repoblika federaly tsy miankina iray izay nanjaka tamin'ny rafitry ny parlemanta demokratika. Izy io dia fiaraha-monina maro an'isa sy fiteny maro ary foko. Ny mponina ao India dia nitombo tamin'ny taona 361 tapitrisa tamin'ny 1951 ka hatramin'ny 1,211 tapitrisa tamin'ny taona 2011. Nandritra izany fotoana izany, ny fidiram-bolan'ny nomera-kelin'izy ireo dia nitombo hatrany amin'ny $ 64 $ isan-taona ka hatramin'ny $ 1,498, ary ny taham-pianarana azy amin'ny 16.6% ka hatramin'ny 74%. Avy amin'ny firenena nampahantraina tamin'ny 1951, i India dia nanjary toekarena lehibe, haingana ho an'ny serivisy teknolojian'ny fampahalalam-baovao, miaraka amin'ny saranga antonony. Manana fandaharan'asan'ny habaka izy io ary misy misiônera extraterrestrial maro efa nomanina na vita. Ny filma sarimihetsika, mozika ary fampianarana ara-panahy dia mitana toerana lehibe amin'ny kolontsaina eran-tany. Nihena ny tahan'ny fahantrana i India, na dia nitombo aza ny tsy fitovian'ny toekarena. India dia firenena fitaovam-piadiana niokleary, izay avo lenta amin'ny vola miaramila. Izy io dia miady hevitra amin'i Kashmir miaraka amin'ireo mpifanolobodirindrina aminy, Pakistan ary Shina, tsy voavaha hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-20. Anisan'ireo fanamby ara-toekarena atrehin'i India ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy, ny tsy fahampian-jaza, ary ny fisondrotan'ny rivotra. Ny tanin'i India dia megadiverse, misy hotonony biodiversity efatra. Ny rakotra ala ala dia mahatratra 21,4% amin'ny faritra misy azy. Ny bibidia any India, izay nentina tamin'ny fomba nentim-paharazana tamin'ny kolotsaina India, dia tohanana amin'ireo ala ireo, ary any an-kafa, ao amin'ireo toeram-ponenana arovana.